China 5T tube ice muchina fekitori uye vanotengesa | Herbin Ice Maitiro
Simba rinomhanya: 15.625 KW.
Tembiricha yechando: Minus 5 ℃.
Ice mhando: Transparent uye kristaro.
Ice dhayamita: 22mm, 29mm, 35mm kana zvimwe.
Refrigerant: R404a, R448a, R449a, kana zvimwewo.
Magetsi: 3 chikamu chemagetsi magetsi.
Ice zuva nezuva inogadzira kugona: 5000 kgs echando machubhu nemaawa makumi maviri nemana.
Standard yekushanda mamiriro: 30, ambient uye 20 ℃ tembiricha yemvura.
Simba rekushandisa: 75 KWH yemagetsi ekugadzira yega yega 1 toni yemazaya echando.
Tube chando rudzi rwehomwe yechirinda yechando ine dhayamita yekunze ø22 、 ø29 、 ø35mm uye kureba 25 ～ 42mm. Iyo gomba dhayamita kazhinji ø0 ～ 5mm uye inogona kugadziriswa zvinoenderana nechando kugadzira nguva.
Zvimiro: Tube chando chakakora uye chakajeka chine nguva yakareba yekuchengetedza. Izvo hazvigone kunyungudika munguva pfupi. Tube chando yakanaka kwazvo, uye inogona kuve yakajeka 100%, kristaro. Inotaridzika zvakanaka kwazvo muchinwiwa, chinwiwa.
Kushanda: Kudya kwemazuva ese, chinwiwa chinotonhora, chinwiwa, kuchengetedza miriwo uye hove dzegungwa nyowani, nezvimwe.
Heano makuru mabhenefiti eangu Tube echando michina.
1.Iyo kopi yeakanakisa uye ari nani pane akanakisa.
Zvakasiyana nemamwe mafekitori echando muchina, Herbin Ice masisitimu akasiya chiChinese chinyakare murombo chubhu yechando tekinoroji muna 2009. Tinotanga kudzidza nekutsvaga Vogt ice technology kubvira 2009.
Neye zvishoma nezvishoma uye inogara ichitsvagisa uye kusimudzira, isu ikozvino tinogona kuita chubhu echando michina neyakanakisa kushanda mashandiro. Tube echando michina yakagadzikana uye ine yakareba kwazvo nguva yebasa. Makina anoshanda uye anochengetedza simba zvakanyanya. Ice machubhu akagadzirwa nemuchina ari pachena, kristaro uye akanaka.
Mashini ine yekupedzisira chubhu chando tekinoroji. Evaporator inoshongedzerwa neyemvura level sensor, iyo inochengetedza iyo mvura mwero inonzwisisika. Inoita tembiricha yekupisa sisitimu iri pasi pesimba kwazvo. Zvichakadaro, isu tinowedzera chinogashira chemvura pamusoro peiyo evaporator, 2 kupisa ex-changer munzvimbo dzinodiwa, smart mvura inopa, zvichingodaro.
Iyo compressor inogara ichingoshanda mumamiriro akanakisa nepo mamwe maChinese machubhu echina muchina wekuomesa ari nyore kushatiswa panguva yekudzora.
Kutenda kune yedu yepamusoro tekinoroji uye smart system dhizaini, isu tinokwanisa kushandisa diki compressor kusvika kune imwechete ice chando. Izvo zvinofananidzwa nemamwe maChinese machubhu echando michina. Nediki compressor, yedu chubhu echando michina inoshandisa mashoma magetsi kuita iwo akaenzana echando.
Ngatiregei kuverenga pamwe ne5T / zuva chubhu yechando muchina.
Mamwe maChinese emvura akadzora chubhu echando michina inoshandisa 105KWH yemagetsi ekugadzira yega toni imwe yechando.
Yangu chubhu yechando michina inodya chete 75KWH yemagetsi ekugadzira yega toni imwe yechando.
Musiyano wekugadzira yega yega toni yemachubhu machena i30KWH yemagetsi.
Saka mazuva ese, mutsauko wekushandisa magetsi i30x5 = 150KWH.
(105-75) x 5 x 365 x 10 = 547,500 KWH, ndiwo musiyano wekushandisa kwemagetsi mumakore gumi.
Kana vatengi vakasarudza yangu 5T / zuva chubhu muchina muchina, ivo vachachengetedza 547,500 KWH yemagetsi mumakore gumi.
Kana mutengi akasarudza imwe yakashata tekinoroji yemuchina wechando, anoshandisa mari yakawanda kubhadhara iro risingabatsiri magetsi anoshandiswa, 547500 KWH.
Yakawanda sei kune 547,000 KWH yemagetsi munyika yako?
219,000 KWH yemagetsi ingangoita US $ 75,000 muChina.
3. Hunhu hwakanaka newarandi refu.
80% yezvinhu pane yangu chubhu chando michina ndeye epasirese anozivikanwa maratidziro Senge Bitzer, GEA Bock, Danfoss, Schneider, zvichingodaro.
Yedu yehunyanzvi uye ine ruzivo rwekugadzira timu inoshandisa zvizere izvo zvakanaka zvinoriumba.
Izvo zvinokuvimbisa iwe yemhando yepamusoro chubhu echando michina ine yakanyanya kushanda mashandiro
Waranti yeiyo firiji system ndeye makore makumi maviri. Kana iyo firiji sisitimu yekushanda ikashanduka ikava isina kujairika mukati memakore makumi maviri, tinozoibhadhara.
Hapana gasi rinodonhedza mapaipi mumakore gumi nemaviri.
Hapana firiji yezvinhu zvinoputsa mumakore gumi nemaviri. Kusanganisira compressor / condenser / evaporator / ekuwedzera mavharuvhu ....
Garandi yekufambisa zvikamu, senge mota / pombi / mabheyari / magetsi zvikamu, makore maviri.
4. Kurumidza kuendesa nguva.
Fekitori yangu ndeimwe yemakuru muChina izere nevashandi vane ruzivo.
Hatidi anopfuura mazuva makumi maviri kuti tiite imwe kana akati wandei 3T / zuva, 5T / zuva, 10T / zuva chubhu echando michina.
Hatidi anopfuura mazuva makumi matatu kuti tiite imwe kana akati wandei 20T / zuva, 30T / zuva chubhu echando michina.
Nguva yekugadzira yemuchina mumwe uye akati wandei michina yakafanana.
Mutengi haamirire kwenguva refu kuti atore iyo chubhu echando michina mushure mekubhadhara.
Pashure: 3T chubhu yechando muchina
Zvadaro: 10T Tube chando muchina